I-WOWOW Two Handle ekhishini faucet nge Side Sprayer Insimbi Engagqwali
Ikhaya / Ikhishi Faucets / I-Pot Filler Faucets / WOWOW Isibambo Esibanzi Sompompi Wekhishi Nge-Side Sprayer Insimbi Engagqwali
leli faucet lifaka i-side sprayer. Ukwenza imisebenzi yokuhlanza yansuku zonke ibe lula, ungafaka ngokuqiniseka, wazi ukuthi ompompi basekhishini babuyiselwe yisiqinisekiso sethu sokuphila esilinganiselwe.
Isikhiphi sokufafaza ekhishini seside 23118A4
Imifino ekhishini yokufafaza ekhishini iza ngobukhulu obuningi, amafomu nosayizi. Le faucet ekhishini eseceleni yesiphuzo seWOWOW iza nesifutho esiseceleni esisetshenziswa ongawusebenzisa ngaphambi kokugqobhoza amabhodwe akho, amapani nezitsha. I-sprayer eseceleni ngokuqinisekile ingenza ukuqedela imisebenzi yakho yansuku zonke umsebenzi olula futhi omnandi. Isifutho se-WOWOW sibekwe eceleni kwe faucet yasekhishini eliseceleni uqobo, futhi silungele ukukhishwa masinyane futhi kalula. Ngomthungo wayo omude wamasentimitha angama-60, uzokwandisa indawo yakho yokuwasha kakhulu. Ikakhulu uma ikhishi lakho lifakwe isinki ephindwe kabili, lesi sifutho esisehlangothini singangena kahle kakhulu. Yonke indawo, into noma ekhoneni ngaphakathi nekhoneni lekhishi lakho kungafinyelelwa ngalo nge-sprayer eseceleni yesiphuzo ekhishini se-WOWOW '.
I-sprayer eseceleni ikuvumela ukuthi ufafaze ngokuqondile amanzi ngokuchofoza okulula kwinkinobho eseceleni engemuva kwesifutho ngokwaso. Ngaphandle kokukhipha kuqala ungasebenzisa i-sprayer eseceleni futhi ukugeza izandla, noma eminye imisebenzi yasekhishini. I-hose yamanzi ye-sprayer eseceleni ixhumene nesikhiphi namanzi ayo nge-valve ekhethekile. Le nsiza yokuxhuma ilawula lapho amanzi aqondiswa khona lapho kusetshenziswa isifutho sasohlangothini. Ngale ndlela ungathola umsakazo wamanzi onzima ukuze uhlanze amapulethi akho ngaphandle kokukhulula amandla akhe.
Isikhiphi sokufafaza ekhishini se-design side
Le faetet yasekhishini eseceleni ye-WOWOW yenzelwe ngokunakekelwa okukhulu nangomzamo. Abaqambi be-WOWOW babefuna ukuhlanganisa izici ezahlukahlukene ukuze bafike emfashinini, wesimanjemanje, futhi ngaphezu kwakho konke ukwakheka kwetheketini lesibindi. Kwakhethwa ukwakheka kwe-high-arc, njengoba okuthiwa i-gooseneck ngokushesha kunikeza isitayela esihle kwifenisha ekhishini. Ngakolunye uhlangothi, izibambo zombili zenzelwe ukudonsa ngokunamandla ukuthinta okhethekile kulo faucet we-sprayer ye-WOWOW. Okokuqala, kukhethwe izibambo ezimbili ukunikela ngomthelela omangalisayo nalesi sikejana sokwenza ekhishini se-sprayer ekhishini. Okwesibili, izibambo zithole idizayini ekhethekile yokwenza lolu faucet olusekhishini lokuphenya ngokungangabazeki lube lokubamba wamehlo kunoma iyiphi ikhishi.
Ukuqedwa okukhethekile kwe-chrome kwesitofu sekhishini se-WOWOW se-sprayer ekhishini kukhanya kakhulu. Ngale ndlela ukubukeka okufana nesibuko kufinyelelwa, okungahlanganiswa nanoma yisiphi isitayela sokuhlobisa. Isikebhe esisekhishini lokushiza eseceleni ngensimbi engenasici, sibonisa ukubukeka kwaso kwezimboni, ngenzuzo eseceleni yokuthi ihlala isikhathi eside. Ukuqedwa okungenazimbotshana kungaqinisa ngokuphelele ukubukeka kokushona kwekhishini lakho. Umklamo wakho wasekhishini omusha (omusha) ngokuqinisekile uzokhushulwa ngaleli faucet yasekhishini yokufafaza eyisimangaliso.
Isikulufu sokuqala ekhishini lokufafaza ekhishini
I-WOWOW yaziwa umhlaba wonke ukuhlinzeka amafekhethi ekhishi lokuqala ngenani elingabizi. Ungasho impela ukuthi i-WOWOW inikeza inani lemali elingcono kakhulu. Iningi lemikhiqizo yama-A-brand lishelela kathathu noma libuye lilinganise inani lentengo elikhokhiswa i-WOWOW ngamakhompiyutha alo asekhishini, futhi ikhwalithi nakanjani alikho ngaphansi kwale mikhakha yama-A. Singasho ngokweqiniso ukuthi ikhwalithi yethu ingcono kakhulu kunemikhiqizo yama-A ambalwa. Sikufakazela lokhu kaninginingi.
Ngoba sithembele kunani lethu lemali, sikunikeza isikhathi seminyaka emihlanu. Uma isikebhe sakho sasekhishini se-side sprayer singalimala ngasikhathi sinye, i-WOWOW ibingayijabulela ngenkulu into entsha. Ngaphandle kokuhlupheka. Njengabanikezeli abaningi, noma ezinye izinhlobo zama-A, zikunikeza isikhathi semvume yonyaka owodwa, e-WOWOW sicabanga ukuthi kufanele sidlule ngaleya ndlela yomkhakha. Uma isikebhe sakho sangasekhishini esisehlangothini lwakho singalimala ngemuva kweminyaka emibili noma emithathu, asicabangi ukuthi kungakuhle ukuthi kufanele ubhekane nengozi yalokhu. Isikhiphi se-spray spray ekhishini kufanele ngaphandle kokungabaza luhlale okungenani iminyaka emi-5, futhi e-WOWOW sithatha umthwalo wethu kulokhu.
Isikhiphi sokufafaza ekhishini esingenasici
Amapayipi ompompi ohlangothini wokufafaza ekhishini ayenziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu. Uyakuqaphela lokhu ngokushesha lapho uphethe le ompompi yekhishi ohlangothini lokufafaza ezandleni zakho. Isisindo sihlaba umxhwele cishe ne-50 oz, futhi sembula ikhwalithi yezinto ezisetshenzisiwe. Njengoba ompompi abaningi bashibhile bengasinda kancane, ngoba ukusetshenziswa okuncane kwezinto, noma ngisho nokushoda kwezinto zensimbi, i-WOWOW iyaziqhenya ngezinto ezisezingeni eliphezulu ezisetshenziswayo. Izixhumi zethusi, ingxenye yensimbi engagqwali kanye namavalvu asebenza ephezulu nezibambo. Uyalibona ikhwalithi lapho ulibona, nangompompi wasekhishini wokufafaza i-WOWOW lokho ngeke kwehluke.
Ngaphandle kwesisindo sayo, ukusetshenziswa kwemisebenzi ehlukene yaleli ompompi lasekhishini lokufafaza ohlangothini nakho kuveza ikhwalithi yalesi siqeshana semishini yasekhishini. Ukuthi izibambo zihamba kahle kanjani ngaphandle kokungqubuzana noma ukubuyela emuva ngokwesibonelo. Ubushelelezi bokusebenzisa ipayipi lamanzi le-sprayer eseceleni ngakolunye uhlangothi, nokuthi libuyela kanjani endaweni yalo yoqobo. Futhi kulula kangakanani ukusebenzisa le sprayer eseceleni yokuhlanza ngenkinobho yensimbi engagqwali. Konke kunezela kwikhwalithi emsulwa engenakuphikiswa.
Isikhiphi sokufafaza ekhishini esisetshenziswa kalula
Umpompi ompompi wekhishi ohlangothini kulula kakhulu ukufaka. Njengoba kuza nethuluzi lokufaka eliphelele, ungafaka le ompompi yekhishi lasesifafazeleni ngaphakathi kwesigamu sehora. Futhi ubungeke udinge ngisho noplamba obizayo. Imiyalo ecacile yenza kube nokwenzeka ukufaka leli ompompi lasekhishini lasesifafazeleni ngokwakho, ngaphandle kokusebenzisa noma yimaphi amathuluzi anzima. Yonke imishini yokufaka lolu cezu lobuciko ekhishini lakho iza ifakiwe.
Njengoba i-WOWOW inenani elikhulayo lamakhasimende aphesheya, aqhubeka nokubuyela ku-WOWOW lapho edinga enye ompompi, futhi sikunikeza nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-90. Ngaphandle kwesikhathi sewaranti seminyaka emi-5 esingenabungozi, uzobuyisa nemali yakho uma ungeke umangale ngenani lemali olitholayo ngaleli ompompi ojikelezayo wasekhishini. Uthola imali egcwele ngaphandle kokubuzwa imibuzo. Okuhlangenwe nakho kwethu kusitshela ukuthi ngeke kudingeke, kepha sizoba nawe njengelinye ikhasimende lempilo e-WOWOW!
Izinzuzo zesikebhe esiseduze se-sprayer ekhishini ngamafuphi:
• Isitshizi esinamandla sangaphambi kokuswayiza soguthi
• Idizayini enhle nenesibindi
• Ukusebenza kahle kokuzenzela
• Isiphetho se-nickel se-Stylish
SKU: 23118A4 Categories: Ikhishi Faucets, I-Pot Filler Faucets Tags: I-Nickel ehlutshiwe, Hlukanisa Isiphatho, Isikhi se-Side